Fiakaran’ny saran-dalana : mitaky kalitao sy tolotra tsara ny mpanjifa | NewsMada
Fiakaran’ny saran-dalana : mitaky kalitao sy tolotra tsara ny mpanjifa
Par Taratra sur 04/02/2017
Nitohy, hatry ny omaly, ny fampiakarana saran-dalana ho an’ireo taxi-be sasantsasany eto Antananarivo. Tsy maintsy mandeha ny mpanjifa fa tsy afa-manoatra. Na mimenomenona sy tezitra aza, tsy maintsy mitaingina taxi-be.
“Raha tsy maintsy hiakatra ny saran-dalana, tokony hanatsara ny tolotra sy ny kalitaon’ny fiara ampiasaina ny mpitatitra ho fanajana ny mpanjifa”, raha ny hevitr’ireo mpandeha taxi-be mihazo an’i Tanjombato iny.
Hatramin’ny omaly, tsy hita taratra ny fanatsarana takin’ny mpanjifa. Rotidrotika ny seza, mbola misy mitsangana ny mpandeha, feno olona ny lalantsara, tsy manaja mpandeha ny mpanampy mpamily, maloto sy mamofona ihany koa izy ireny…
Mihoa-pampana ny fanararaotana ataon’ny mpitatitra raha ny hevitry ny mpanjifa hatrany. “Tendan-kanina loatra ka lasa tsy mifampitsinjo amin’ny vahoaka fa lasa fitiavan-tena tafahoatra ny azy ireo”, hoy ny sasany tezitra.
Misafidy ny mandeha an-tongotra ireo mpianatra sy mpiasa sasany rehefa mamonjy fodiana. Tsy maintsy mandeha taxi-be kosa mamonjy fotoana rehefa maraina. Miaraka maromaro ireo mitovy lalana dia miara-mirona mandeha an-tongotra rehefa mirava avy miasa na mianatra. Efa alimbe anefa vao tonga any an-trano, mitaintaina eny an-dalana vokatry ny tsy fandriampahalemana eto an-tanàna.
Ankoatra izany ny havizanana. Sady efa rera-dahasa sy fianarana no mbola mandeha an-tongotra amin’ny tsy fisian’ny vola hatao saran-dalana.